I-CH4 iSenzi soViweyo seRhasi, abaXhobisi - iTshayina CH4 iSensor Sensor abavelisi
I-ASIC AFE Idityanisiwe yeDual Channel NDIR infrared CH4 isivamvo sokutsha kwegesi yegesi-SDG11DF33G1
Intsapho ye-SDG11DF33G1 ye-sensor ye-thermopile ehlanganisiweyo ye-NDIR (ukufunyanwa kwegesi engafakwanga infrared) sisixhobo esine-sensor yesixhobo se-thermopile sensor esinamandla ombane ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). I-infrared band band yokupasa isihluzi phambi kwesenzi esenza ukuba isixhobo sinobuchule ekujoliswe kuyo. Ijelo lesalathiso linikezela ngembuyekezo kuzo zonke iimeko ezifanelekileyo.
I-Methane ye-Channel enye (CH4) ye-NDIR Isivamvo seRhasi soVavanyo lweRhasi yeNdalo kunye neMeter-SSG11DF33
Intsapho ye-SSG11DF33 ye-sensor ye-thermopile ehlanganisiweyo ye-NDIR (ukufunyanwa kwegesi ye-infrared) sisixhobo esinye se-thermopile sensor esine-voltage yesiginali esivelisayo ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). I-infrared band band yokupasa isihluzi phambi kwesenzi esenza ukuba isixhobo sinobuchule ekujoliswe kuyo.
Idityanisiwe ye-ASIC AFE Isiteshi esinye seNADIR Inzwa yegesi CH4 Isitshisi seRhasi-SSG11DF33G1
Intsapho ye-SSG11DF33G1 ye-sensor ye-thermopile ehlanganisiweyo ye-NDIR (ukufunyanwa kwegesi ye-infrared) yenye yejenali yentsimbi ye-thermopile enesiginali esivelisayo esilingana ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). I-infrared band band yokupasa isihluzi phambi kwesenzi esenza ukuba isixhobo sinobuchule ekujoliswe kuyo.